DAAWO: Xaflad lagu maamuusayay dhalashada Nabigeena Suuban (NNKH) oo lagu qabtay magaalada Bergen. | gobolada.com
DAAWO: Xaflad lagu maamuusayay dhalashada Nabigeena Suuban (NNKH) oo lagu qabtay magaalada Bergen.
Iyadoo lagu jiro bisha Mowliidka ee xuska Nabigeena (NNKH) ayaa waxaa sanadkaan si weyn loogu xusay magaalada Bergen ee dalka Norway.
Xaflad ballaaran oo lagu maamuusayay dhalashada Nabigeena suuban ee Muxamad (NNKH) ayaa lagu qabtay Masjidul AL-HUDAA Magaalada Bergen ee dalka Norway.
Xaflada quruxda badan waxaa soo agaasimay mas’uuliyiin ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed, iyadoo ay ka soo qeyb galeen Culumaa’udiinka iyo dhammaan qaybaha bulshada ku nool magaalada.
Sidoo kale musaabada xuska waxaa ka soo qeyb galay Sheekh C/raxmaan Sheekh Muxudiin Celi oo dalka dibadiisa ka yimid, waxaana xaflada lagu furay aayadaha qur’aanka Kariimka.
Intaas kadib waxaa qudbad baraarujin ah ku furay Sheekh C/raxmaan Sheekh Muxudiin Celi isla markaana ku dheeraaday Siirada Nabiga (NNKH), dhalashada Nabiga (NNKH) iyo dhowrista midnimada Ummadaha Islaamka ahi.
Guddoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Bergen C/qaadir Axmed Raagge (Waayeel) oo kalmado ka jeediyey ayaa sheegay Mowliidku inuu yahay munaasabad-diimeed Soomaaliduna ay la wadaagto dalalka Muslimiinta Adduunka.
Qasiidooyin nabi amaan isla markaana aan la soo koobi Karin waxaa halkaas ka qaaday mashaa’iq ay ka mid ahaayeen Sheekh Khaalid, Sheekh Mowliid Sheekh Yuusuf, Suldaan Maxamed Cawil, Aadan Xasan Cawaale, Cali Biloow, Macalin Ducaale, Aadan Xasan Buulle oo ah Guddoomiyaha Masaajidka Al-Hudaa iyo culumadii kala duwanayd ee ka qeyb gashay xuska Nabiga (NNKH) oo maalintii shalay lagu qabtay masjidka Al-Hudaa Magaalada Bergen ee dalka Norway.
Gaba-gabadii iyo gunaanadkii xaflada waxaa kalmado mahadnaq ah raacsaday Sheekh C/raxmaan Sheekh Muxudiin Celi oo u mahadceliyey dhammaan kasoo qeyb galayaashii Xaflada, dadka qaabilsanaa maamulka iyo soo dhaweyntii loogu sameeyey magaalada Bergen oo markii ugu horeysay Sheekhu bulshada Soomaaliyeed kala qeyb qaato xuska Nabiga (NNKH) ee bisha Mowliid taasoo lagu qabtay magaalada Bergen Caasimada labaad ee dalka Norway.
Ugu danbeyntii dadweynihii ka soo qeyb galay xaflada mowliidka nabiga suuban (NNKH) waxaa ka muuqday wajiyadooda farxad iyo maxabo ay u qabaan rasuulka suuban waxayna ILAAHAY uga baryeen Ummadda Soomaaliyeed inuu ALLE towfiiqka waafajiyo.